KATHMANDUTemperature 20.12°CAir Quality107
८ फागुन ०७६ मा गोरखापत्रको कोहलपुर संस्करण सुरुआत गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सधैँझैँ मिडियालाई गाली गरे । मिडियालाई एक आँखा चिम्लिएको सिकारीका रूपमा अर्थ्याउँदै उनले मिडियामा हुने आलोचनाले सरकारलाई फरक नपर्ने बताउन भ्याए ।
‘एक आँखो चिम्लिने त सिकारी हुन्छ । प्रेसले दुइटै आँखा खुल्ला गर्नुपर्दछ,’ उनको अर्ती थियो, ‘अहिलेको प्रवृत्ति सिकारीले जस्तो सरकारलाई ठोक्ने भएको छ तर जति ठोके पनि केही फरकै पर्दैन ।’
तर यसपटक साँच्चै फरक पर्‍यो किनकि यो सरकारको आलोचना मात्र थिएन । बरु सधैँ समाजलाई सदाचारका पाठ सुनाउँदै आलोचकलाई हतोत्साही गर्न खप्पिस गोकुल बाँस्कोटाको पद खुस्काउने खबर मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको थियो । रातारात मिडियाहरूमा आफूले कमिसनका लागि गर्दै गरेको ‘सेटिङ’ को अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी कोहलपुरबाट काठमाडौँ आइपुगे र राजीनामा दिए । सधैँभर आफैंले होच्याएका पत्रकारहरूलाई 'फेस' गर्ने पनि आँट गरेनन् ।
मेरो बारेमा प्रश्न उठेकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष नैतिकताको आधारमा मन्त्री पदवाट राजिनामा दिएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद ।
— Gokul Prasad Baskota (@GokulPBaskota) February 20, 2020
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलन होस् वा सार्वजनिक कार्यक्रम, सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा ‘कन्फिडेन्ट’ देखिन्थे । तर उनको त्यो ‘कन्फिडेन्स’ पत्रकारहरूलाई थर्काउन, मिडियाहरूलाई मानमर्दन गर्न र जनसाधारणमा आलोचित सरकारका कदमहरूको ढाकछोप गर्नमा प्रयोग भइरह्यो । बाँस्कोटालाई धाप दिइरहे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ।
५ फागुन ०७६ मा धुलिखेल नगरपालिकाको ३४ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा भएको कार्यक्रममा ओलीले गरेको गोकुलको प्रशंसा एउटा उदाहरण हो । ‘राजनीतिक तुलो राख्ने हो भने तुलाको एकातिर गोकुल बाँस्कोटा र अर्कातिर अरु सबैजस्तो हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘सरकारको विरोध गर्नुपर्‍यो भने गोकुल बाँस्कोटातिर हेर्नेबित्तिकै चुप लाग्ने हुन्छ ।’
आरिसे जलिरहन्छ, प्रधानमन्त्री @kpsharmaoli वाट सञ्चारमन्त्री @GokulPBaskota को प्रशंसा चलिरहन्छ ! pic.twitter.com/K1pW8boyuk
— ShIvA DaHaL (@dahalshivaji) February 19, 2020
प्रधानमन्त्री ओली जसरी आफ्नो सरकारलाई सुशासनका लागि काम गरेको देखाउन खोज्थे, गोकुल त्यसैलाई पछ्याउँदै सरकारको प्रतिरक्षा गर्थे । १६ माघ ०७६ मा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि गरेको समारोहमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘म भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिनँ, कुन पार्टीको हो, त्यो पनि जान्दिनँ, कुन तहको त्यो पनि चिन्दिनँ, कारबाही गरेरै छोड्छु ।’
तर बुधबार राती मिडियाहरूमा जे खबर सार्वजनिक भयो, त्यसले सरकारको अनुहार उदांगो पार्‍यो । ओलीले अति विश्वास गरेर बालकोटस्थित आफ्नै घरमा बास दिएका, सरकारको प्रवक्ताको जिम्मावारी दिएका गोकुल बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा प्राप्त हुने कमिसनका लागि बार्गेनिङ गर्दै गरेको भेटिए । प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र एवं सरकारका प्रवक्ता नै यसरी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहनुले धेरै प्रश्न जन्माएको छ । सरकारका मन्त्रीहरूको बाहिर देखिने अनुहार र प्रस्तुतीकरण तथा उनीहरूले भित्रभित्रै गर्ने गतिविधिहरूबीच कति अन्तर रहेछ, सोच्नैपर्ने भएको छ ।
गोकुलकै कार्यकालमा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने कयौँ कानुनका मस्यौदाहरू बने । पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका गोकुल प्रेससँग समन्वयकारी भूमिकामा भन्दा पनि कसरी हुन्छ, यसको मानमर्दनमै मस्त रहे । उनको प्रस्तुति र हाउभाउको शैली प्रेसप्रति अहंकारी रह्यो । आफ्नो सम्पत्ति विवरणबारे सोधिएको एक प्रश्नका कारण नेपाल टेलिभिजनका पत्रकार राजु थापाको जागिर गोकुलले खुस्काइदिएका थिए । उनी कतिसम्म पूर्वाग्रही थिए भन्ने एउटा उदाहरण मात्र हो, यो ।
उनकै कार्यकालमा गायकहरू आफ्ना गीतमा प्रयुक्त शब्दका कारण हिरासतमा पुगे । पशुपति शर्मा, दुर्गेश थापा र र्‍यापर भिटेन उदाहरण हुन् । भिटेन पक्राउ पर्नुमा गीतमा प्रयोग भएका शब्दलाई कारण देखाइएको थियो । भिटेन पक्राउपछि ८ कात्तिक ०७६ मा गोकुल बाँस्कोटाले भनेका थिए, ‘दिदी, भाइ, बहिनी, आमा र परिवारसँग बसेर तिनले गाएको गीत सुन्नुस् । समर्थन गर्नुहुन्छ कि लाजले अनुहार रातोपिरो हुन्छ ?’ आज कमिसन सेटिङका क्रममा अडियोमा मन्त्रीले प्रयोग गरेको भाषा मिडियाहरूले हुबहु लेख्न सकेका छैनन् । बरु उनले ‘अमर्यादित’ आरोप लगाएका मिडियाले गोकुलले बोलेका शब्दहरू संकेतमा लेखेर मर्यादा जोगाइरहेका छन् ।
गोकुलकै कार्यकालमा हो, पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट...’ गीत युट्युबमा हालेको केही समयमै हटाउन लगाइयो । यो गीत चर्चामा आउने कारण बन्न पुग्यो, लुट्न प्रेरित गरेका भनी यसले सरकार समर्थकबाट खेपेको आरोप । कलात्मक रूपमा खासै शक्तिशाली नभए पनि गीतले सीधा भाषामा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको मनोविज्ञान उदांगो पारेको थियो ।
गोकुलको मुहारमा ओली नेतृत्वको सरकारको अनुहार हेर्दा पशुपतिकै गीत सजीव भएजस्तो लाग्छ : ‘लुट्न सके लुट कान्छा ! ‘लुट्न सके लुट !’
सायद ‘भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि आफ्नो अनुहार हेर्नेछन् र नेकपाको राजनीतिक तुलो फेरि जाँच्‍नेछन् ।
म्यान्‌चेस्टर सिटीलाई आगामी दुई सिजन च्याम्पियन्स लिग खेल्न प्रतिबन्ध